တစ်ဦးကို USB DRIVE ကနေ INSTALL လုပ်ခြင်း - ဆောင်းပါးများ - 2019
တစ်ဦးကို USB drive ကနေ Install လုပ်ခြင်း
Windows နှင့်အခြား operating system ၏ installation ကိုများအတွက် bootable flash drive ကိုဖန်တီးအဖြစ်တစ်ဦးကို USB drive ကနေကွန်ပျူတာကိုပြန်လည်ဖို့ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေအပေါ်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်လမ်းညွှန်မှုသည်။ ညွှန်ကြားချက်စာရင်းယခုအချိန်တွင် updated ပါလိမ့်မည်, ကျွန်တော်တစ်ဦးကို flash drive ကနေ Windows ကို multiple ဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းဖို့ bootable USB drive ကိုဖန်တီးပါ။
(install လုပ် clean) ကတုတ်ထဲကနေ Windows 10 ကို Installing
တစ်ဦး bootable flash drive ကိုနှင့် dual-boot ကိုဖန်တီးရန်အစီအစဉ်ကို
တစ်ဦး bootable USB flash drive ကို Windows 10 ကိုအောင်5နည်းလမ်းများ
bootable flash drive ကိုရုဖု3+ ဗီဒီယိုကို Windows 10 ဖြစ်ပါတယ်
တပ်ဆင်စရာမလိုဘဲတစ်ဦးကို flash drive ကနေ Windows 10 ကိုအပြေး
bootable flash drive ကိုဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲမှာ Windows 10 နဲ့ 8.1 ဖြစ်ပါတယ်
bootable flash drive ကို MacOS Sierra
အဆိုပါ Mac နဲ့ Windows ပေါ်မှာ bootable flash drive ကို OS X ကို Yosemite
UEFI များအတွက် FAT32 အပေါ် 4GB ထက်ပိုကြီးတဲ့အနေနဲ့ ISO ကိုမီးမရှို့ဖို့ကိုဘယ်လို
UltraISO တစ် bootable USB drive ကို Creating
bootable flash drive ကို Windows 8.1 ကိုဖြစ်ပါတယ်
ရုဖုအတွက် bootable flash drive ကို UEFI GPT
Windows အ command prompt ကိုတစ်ဦး bootable USB drive ကို UEFI Creating
မိုက်ကရိုဆော့ဖတပ်ဆင်ခြင်းမီဒီယာဖန်ဆင်းခြင်း Tool ကိုအတွက်တပ်ဆင်ခကို USB drive ကိုသို့မဟုတ် ISO ကို Windows 8.1 Creating (အရာရှိတဦးကနည်းလမ်း)
WinSetupFromUSB ၏အကူအညီဖြင့် Multiboot ကို USB flash drive ကို
WinToHDD ၏အကူအညီဖြင့် Multiboot ကို USB flash drive ကို
က boot flash ကိုစစျဆေးဖို့ကိုဘယ်လို
ဘတ္တ (Boutler) တွင် Boot တက်နှင့် multiboot ချောင်းကို Creating
USB အဖို့က ISO - တစ်ဦးတပ်ဆင်ခကို USB Windows ကိုအောင်ဟာအလွန်ရိုးရှင်းပြီးလမ်း
တစ်ဦး multiboot ချောင်းကိုကိုဖန်တီးရန်တစ်ဦးထက်ပိုသောအလုပ်လုပ်တဲ့လမ်း
တစ်ဦး bootable USB flash drive ကို Windows 8 နဲ့ UltraISO အတွက်က Windows 8.1 ကိုအောင်လုပ်နည်း
Multizagruzochnye Sardu အစီအစဉ်ကို အသုံးပြု. မောင်းနှင်
တစ်ဦး bootable USB drive ကိုတစ်ဦးက ISO image ကိုဖန်တီးပေးဖို့ကိုဘယ်လို
တစ်ဦးကို USB drive ကနေ Windows 8 ကို Install - တရားဝင် Windows ကိုမှတဆင့်ဖန်တီးမှု မှလွဲ. တစ်ဦး bootable USB drive ကိုဖနျတီးဖို့နညျးလမျးသုံးခု, အကြံပေး Upgrade
တစ်ဦးကို USB drive ကနေ Windows7ကို install လုပ်ဖို့ - ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာ bootable Window7ကို USB drive ကို Creating
Windows XP ကို ​​bootable flash drive ကို
အဆိုပါ Windows XP ကို ​​installation ကိုတုတ်၏ဖန်ဆင်းခြင်း - တစ်ဦးကို USB drive ကနေ Windows XP ကို ​​install လုပ်ခြင်း
ကွန်ပျူတာကို USB drive ကနေ boot တက်နိုင်အောင်, BIOS ကို configure BIOS ကို setup ကို - ကို USB drive ကနေ boot တက်။
bootable flash drive ကို Windows7ကိုဖြစ်ပါတယ်
Windows 8 ကို bootable flash drive ကို
bootable flash drive ကို Acronis True Image တို့နှင့် Disk ကိုဒါရိုက်တာ
bootable flash drive ကို Ubuntu မှာ
သူတို့တစ်တွေသည် Windows ပတ်ဝန်းကျင်တွင် run Linux ကိုအတူ flash ကိုကတ်များကိုဖန်တီးရန် Linux ကိုတိုက်ရိုက် USB ကဖန်ဆင်းရှင်ကိုသုံးနိုင်သည်။
ပုံတစ်ပုံကနေတစ်ဦး bootable USB flash drive ကိုအောင်လုပ်နည်း
Drive ကို Recovery ကို Windows 8 ကို bootable flash drive ကို
program တစ်ခု FlashBoot သုံးပြီး bootable USB drive ကို Creating
အစား flash drive ကိုအပေါ်ဖိုင်တွဲတွေနဲ့ဖိုင်တွေ, ဖြတ်လမ်းအိုင်ကွန်: ဖြေရှင်းချက်
Microsoft က Excel ကိုအတွက်ညီမျှခြင်း၏ဖြေရှင်းနည်း
Windows7တွင် VPN ဆက်သွယ်မှုတက်ချိန်ညှိခြင်း
အားလုံးစာဖတ်သူများမှနှုတ်ခွန်းဆက်! မတော်တဆဖိုင်တစ်ခုဖျက်ပစ် (သို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုပြီး), ထိုနောကျမှ, သည်သူတို့အထဲတွင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ခဲ့ကြောင်းသဘောပေါက်: ငါအများကြီးအသုံးပြုသူများအလားတူအခြေအနေမျိုးရင်ဆိုင်ခဲ့ကြပြီထင်ပါတယ်။ ဘာလုပ်ဖို့ ... နှင့်ဖိုင်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါသည် - တောင်း Checked? ဟုတ်ပါတယ်, ဒေတာဆယ်တင်ရေး software ကိုသုံးပါ။ ဆက်ဖတ်ရန်
အွန်လိုင်း GIF ကို-ကာတွန်း Creating
ဘစ်ဒဖန်ဒါ Internet Security 2014 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ကိုအကောင်းဆုံး antivirus ကိုတဦး